Mila fahatsiarovan-tena izao… | NewsMada
Mila fahatsiarovan-tena izao…
Toy ny isan-taona, tonga indray ny Pentekosta. Fahatsiarovana ny firotsahan’ny Fanahy Masina tamin’ny mpianatry ny Tompo. Mby aiza izay fahatsiarovana izay? Mba tena ao anatin’ny finoana, fanantenana, fiainana… Misy ny very fanahy mbola velona amin’izao toe-draharaham-pirenena izao. Hanao ahoana ihany?
Mbola saro-binanina be ihany ny raharaha, mahavalalanina sy mahafanina; eny, na eo aza ny tombantombana etsy sy eroa. Tena misy ny finoana amin’ny fanarenana sy fanorenana ho amin’ny vaovao indray, taorian’ny fitsanganan’ireo depiote ho an’ny fanovana? Na tena misy ny fahavononana sy finiavana hamaha olana…
“Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ny finoana ianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo.” (2 Kor 13: 5). Mba tsy ny vahaolana no olana, na ny mpamaha olana. Mila azo antoka sy maharitra amin’izay ny vahaolana, fa tsy vonjy maika noho ny tombondahiny manokana eo no ho eo, na ny fahaporetana…
Mitaky faharesen-dahatra anaty eo amin’ny tsirairay izany. Mba ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka mbamin’ny taranaka ho avy no hiara-mijery. Mila fanahy handalana izany, fitiavan-tanindrazana, finiavana… Misy fahatongavan-tsaina sy fanahy amin’izao Pentekosta izao? Eny, na Fanahy Masina aza…
Aina ny Fanahy Masina, hery, hetsika… Amin’izay rehetra atao io, amin’ny fotoana sy toerana rehetra. Tsy vitan’ny famoahana fanambarana sy kabary ny raharaha, misy tsy latsa-paka anaty ary tsy tena iainana sy tsy maharitra. Saika endrika ivelany ihany amin’ny hoe tolo-tanana, fanarahan-dalàna… hamaha olana.
Ho hita eo àry ny (h)atao… Mba samy hirotsahan’ny fahatsiarovan-tena ny tsirairay amin’izao toe-draharaha sarotra sy manahirana izao? Ao anatin’izany ny fandeferana, ny fanetren-tena, ny fahamoram-po, ny fahalemem-panahy… Tsy izay ny manam-panahy? Na mba fahatsiarovan-tena ahay ho an’ny tanindrazana…